Ikhaya | Wanzhanxing Apparel
Isiliphu se-Shapewear dress
Izihloko zethangi elikhulelwe & camisole
Ingubo ekhulelwe ekhulelwe
Izingubo zansuku zonke
Umkhiqizi weSposesele ShapewiarOem&Okomdlalo
I-Wanzhanxing Apparel ngumkhiqizi we-reapewear omuhle kakhulu, sigxile ngaphansi kwengubo yangaphansi engenamthungo, i-shapewear, inkambiso ye-activeWear, i-Splip dress kanye nemikhiqizo ye-Maternity Production. Imikhiqizo yethu ifaka isiliphu sokugqoka se-shapewear, i-shapewear thong, lawula ama-panties, i-shapewort bodysuit, ezemidlalo bra kanye ne-leggings yezemidlalo. Ngaphezu kwalokho, singanikeza i-ODM& insizakalo ye-OEM.
Umhlinzeki we-WZX Women's ShapeWar Support Tummy Control Slimmer Body Shid
Abesifazane okhalweni lomqeqeshi ogcwele womzimba we-wandebming Mid-Thigh Shaper Butt Lifeter HardLo mzimba we-slimming wenziwe ngekhwalithi ephezulu kakhulu, i-silky, ethambile ethambile, nendwangu ephefumula, ama-corset leotards angaphansi kwe-vest ahlanganiswe ne-nylon ne-spandex. Lo mzimba ojwayelekile ungagqokwa usuku lonke, ubumba kalula okhalweni ophelele kanye ne-hip curve kusiza ukuthi ubukeke kahle ku-Outfit / Suits, futhi wenze umzimba wakho ungabi izigaxa noma amaqhubu noma ama-bulks, ukuze ube ne-Hourglass enhle Umdwebo, wenza okukhangayo.
I-WZXF ANCELY TOMPLEST TUMMY Ilawula abahlinzeki be-bodysuit wholeseit wholeseit persosale persase
Abesifazane Wami Waist Trainer Bodysuit Tops Slim Full Egcwele Umzimba Womzimba Whenless Sexy Sexy V Neck Leotard Stretty BordySuitI-Bodysuit engenamikhono yabesifazane basebenzisa ubuciko obukhethekile benza ukucindezela okuqinile engxenyeni ephakathi, kusonga okhalweni& isisu& Emuva, qinisa i-tummy yakho bese ubuyela emuva ngokumangazayo, futhi ungafihla ama-bump kanye nama-bulges ezinhlangothini zombili ukuze unciphise okhalweni lwakho, unikeze isithombe esihle sehora. Lo mzimba ongenamthungo wabesifazane abane-bra yi-classic ephansi ye-v-intamo ye-V-intamo, ikhola yakho, amabele, nobuso buzogodo kahle. Iziqongo zabesifazane ezingenamikhono zingagqokwa nge-bra yakho oyithandayo, esiza ukuphakamisa umugqa wesifuba futhi ikhombisa ukwakheka kwe-sexy Hourglass.
I-WZX Maternity Shintsha ikhipha ngaphezulu kwesisu se-OEM ODM
I-Women's Maternity Shapezelaar shots heal okhalweni okhalweni oluphezulu olungaphansiLokhu kukhulelwa kwe-Shaternity Shapewear Report Aimorless Aimort Boyshorts Shapezelaar inikeza i-bump aslo, emuva, kanye ne-hip ngaphansi kwezingubo eziqinile, i-opaque ngokuphelele, futhi icashe zonke izimbumbulu, ibamba isisu sikamama. Khula. Ama-panties athambile futhi anobungane be-nylon Umama angakugqoka kunoma yimuphi umcimbi obalulekile, ukugeza izingane, i-pophoot ye-maternity, kanye nokugqoka kwansuku zonke.
I-WZX yabesifazane be-slip ephelele ye-spaghetti eguqukayo umakhi we-oem odm
Isiliphu esigcwele sabesifazane abangaphansi kokugqoka okuguqukayo kwe-spaghetti strap knee ubudeLe ngubo yeTunic yenziwa ngo-Lightweight yenziwe ngezinto eziphefumulelwe, umuzwa wokuthinta kwendwangu ubushelelezi futhi une-comfy. Cishe akunakwenzeka ukumelana ne-vishove ephuthelwe yihlobo elisehlobo elingenamikhono. Idizayini yayo ebukekayo iyingubo evamile ehlobo enomucu we-turdy spaghetti kanye nentambo ebunjiwe yesipuni engenza ukuboniswa okuphelele kwe-clavicle ephelele, futhi design ungqimba oluphindwe kabili kunezela umuzwa wobuhle futhi ngeke ubone. Isitayela se-Classic: Isitayela esiqondile silungele izibalo zabantu abaningi, kanye nesembozo esiyisisekelo solwandle esiyisisekelo siphelele ngezikhathi eziningi.
Insizakalo yokwenza ngokwezifiso brand
Imisebenzi yokuklama / izinsuku eziyi-7 zokufakazelwa okusheshayo / ukuphefumula komkhiqizo we-Plus / Ukudaya Kwezemvelo / Ukuphrinta okuyimfihlo
I-Wanzhanxing Apparel Co. Ltd. yifektri eqinisekisiwe ye-BSCI. Sinikeza amakhasimende ethu nge-Premium Seamless Sheamless ShapeWar Sydysuit, eyisisekelo sangaphansi nsuku zonke, inkambiso ye-activewear, ama-reapewear angcono kakhulu we-tummy kanye nokhamiyinti kanye nemikhiqizo ye-maternity yezwe. Sinikeza ngezinsizakalo zokuklama kanye nomsila ngokwesicelo sekhasimende neqembu lokuxhumana ochwepheshe.
Umkhiqizo esiwukhiqizile konke ukudaya okuvikelwa kwemvelo.
Singenza ubufakazi obusheshayo wezinsuku eziyi-7 kanye nokuphrinta okuyimfihlo kwe-logo.
Ngabe ufuna umkhiqizi omuhle kakhulu we-shapewear? Silapha, sicela usithumele i-imeyili noma i-WhatApp kanye nomuntu ovela eqenjini lethu uzobuyela kuwe kungakapheli amahora ayi-12.
Ifektri inesitifiketi se-BSCI. I-yarn inesitifiketi se-OEKO-TEX.
Iqembu le-RD lochwepheshe
Iqembu eliqeqeshiwe lidala imikhiqizo yemfashini futhi engcono kakhulu yemikhiqizo yomzimba futhi ngezifiso izinhlobo ezenziwe ngezifiso zamakhasimende.
Imishini engenamthungo ngamasayizi amaningi
I-Seamless Workshop yokusebenzela nge-12 inch - imishini engu-19 inch Santoni. Kungakhiqiza osayizi abahlukahlukene kanye nemikhiqizo yosayizi kanye ne-plus.
Umthamo owenele wokukhiqiza kanye nokulethwa okusheshayo.
Iminyaka engaphezu kweshumi yesipiliyoni emafektri athumela ngaphandle.
I-Wanzhanxing Apparel Co. Ltd.
I-Wanzhanxing Apparel Co. Ltd. Ingabe umenzi wezifundo wobungcweti, ukumboza indawo enamamitha-skwele ayi-13 500, onamandla anele okukhiqiza kanye nokulethwa ngesikhathi. Besilokhu sihlinzeka nge-OEM&Izinsizakalo ze-ODM kumakhasimende avela kuwo wonke umhlaba, e-USA, UK, CA, AU, de and KR, ect.
Ifektri igcizelela emcabangweni wokuvikelwa kwemvelo nezemvelo ngenkathi usebenzisa ubuchwepheshe obuthuthuke kakhulu ukuhlinzeka ngezinsizakalo zomkhiqizo wakho:
1. Ithimba eliphakeme lokuklama elinikezelwe, ukuhlinzeka ukwakhiwa komzimba okuzimele kobuntu kanye nokufakazelwa okusheshayo kwezinsuku eziyi-7.
2. Umhlangano wokufundisa onobuhlakani, onemishini engu-12 inch -19 inch Santoni engeniswe e-Italy.
3. Sebenzisana ne-nilit brand, i-Oko-Tex100 eqinisekisiwe yomhlinzeki we-yorn.
4. Ukudaya kwezemvelo kanye nokugqoka okungenamthungo.
5. Yenza ngokwezifiso zomkhiqizo wakho womkhiqizo kufaka phakathi ilogo, ukupakisha, umaki we-logo, ect.
6. Ithimba Lenkonzo Yekhasimende Lobuchwepheshe lihlinzeka ngensizakalo efanelekile.
Singabakhiqizi be-reaporesear shrofessional. "Ukusungulwa okusha, ukusebenza kahle, ubuqotho" kuyinsizakalo yenkampani yethu ye-tenet tenet ne-Corporate.
Silangazelela ukusebenzisana okuqotho nawe.
Iqondiswe kuwe izitayela zakamuva ze-UnderWear / wholesele shapewiar bodysuit / ngokwezifiso ezisebenzayo.
WZX Uthuli-Mahhala agcwele umswakama Ubufakazi Warehouse ka-Real Bonisa Shapewear Inkampani
]WZX kuyinto imboni BSCI ezikhethekile timbiwa emazweni amaningi emhlabeni wonke iminyaka engu-16, has a global yokuthengisa inethiwekhi kanye anhlobonhlobo amaklayenti ehlanganisa Wholesalers, abathengisi, futhi ubiza emhlabeni wonke ngo-7 amazwekazi kanye namazwe 53.Ividiyo mayelana nomsebenzi imboni yethu yansuku zonke nokupakisha, ishede kuyinto izintuli futhi umswakama-ubufakazi. lapho izinto ukudlula bonke abahlola, izonikelwa ukuba lo mnyango ukuze ukupakisha futhi lokuthumela.Ingabe ufuna inkampani ye imikhiqizo zabesifazane shapewear, izingubo zangaphansi, noma womama?Bheka akukho okunye. Wena endaweni efanele!
WZX ayina Inqubo ye Seamless Ukukhiqiza Factory
]WZX Seamless Underwear Umkhiqizi Factory kuyintoTop Companies Shapewear futhi Isitolo esidayisa yonke impahla Shapewear Suppliers.Lona isiqophi yenqubo ayina, abasebenzi bethu kuyinto ukusebenza kanzima ngesikhathi ayina workshop.Sine isampula inqubo eziyisisekelo kakhulu nemikhiqizo yethu shapewear, izingubo zangaphansi, activewear, kanye womama.Sisekela inkonzo ngokwezifiso isampula njengoba ngokwezifiso design futhi unikele oyedwa-stop brand service.Ngiphikelela ekukhiqizeni imikhiqizo eliphezulu kusenza ukuthola impumelelo. Futhi singathanda uthole impumelelo nawe.
Inqubo yesampula yesampula ye-WZX yohlelo lwesitayela sangokwezifiso somshini oem odm ongenamthungo ongaphansi
]Lapho sithola umklamo wakho, sizobuyekeza imiklamo ukubona ukuthi ingaphakathi kwamakhono ethu okukhiqiza. Uma kuyinto esiyithandayo futhi usamukela isilinganiso sethu, isinyathelo esilandelayo inqubo yesampula. Umpheki wethu uzokwakha ngokwezifiso ekhompyutheni ukuze aqhamuke nohlelo lomkhiqizo, khona-ke uzoxhumanisa umshini ngohlelo, umshini ongenamthungo uzokhiqiza umkhiqizo ngokuya ngezinhlelo, kuza isampula yokuqala.Abakhiqizi be-Wholesale abasebenza ngeSposesher, abahlinzeki be-wholesare shaperes, i-wzx ye-wanderwear yomenzi yangaphansi, siqinisekisa inani eliphakeme kakhulu futhi linesilinganiso esiphansi, ukuthola eminye imininingwane ngemikhiqizo yethu sicela uxhumane nathi!
WZX Fast Akukhulule Okuhle Iphakheji Prodessional Umkhiqizi
]Sesikhathele abakhiqizi professional kanye abahlinzeki eChina onguchwepheshe ukuhlinzeka kwemikhiqizo yekhwalithi ephezulu ngendlela oyifisayo.UMnyango nokupakisha siqukethe ezingaphezu kuka-70 abasebenzi abanolwazi.Ukuhlolwa Needle izobanjelwa phambi zonke izimpahla Boxed ukuqinisekisa ukuthi azikho imikhiqizo metal zonke izimpahla Boxed ukuqinisekisa ukuphepha izimpahla.Sine izixazululo ephelele kuzo zonke izici inqubo ukwelukwa: ukukhiqizwa oda, zokuthutha impahla, ukweluka ubuchwepheshe, futhi umshini yesondlo.Ngenxa Isitolo esidayisa yonke impahla Shapewear Abakhiqizi, akukho ukuzibamba, ukhululekile ukugqoka, ngemali ephansi ngoba wholesale.Vele ukhululeke nophenyo!